tareen New dhexeeya Iran Turkey TransAsia Express | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraIran, Turkey u dhaxaysa New TransAsia Express tareenka
08 / 01 / 2020 06 Ankara, 98 Iran, Gobolka Central Anatolia, Aasiya, DUNIDA, tareenka, SAWIRADA, GUUD, Headline, TURKEY
Transasia Express, oo isku xirta Ankara iyo Tehraan, waxay ku safraysaa tareen waxayna gaaraysaa 2000 kiiloomitir.
TransAsia Express, laba taaj oo labada dal, Turkey iyo Iran waa la xiriirinaya a wadada u gaar ah. Waa iskaashiga waddooyinka tareennada ee Turkiga iyo Iiraan oo ujeeddadoodu tahay in ay adeegga ugu wanaagsan u fidiyaan dalxiisayaasha ka yimaada daafaha adduunka. Howlgalkan waxaa lagu fuliyaa usbuuciiba hal mar tareeno isku xirta Ankara iyo Tehraan. Wadarta safarku waxay qaadataa ku dhawaad ​​57 saacadood waxayna socotaa in kabadan 2000 oo kiiloomitir. TransAsia Express tareen ku fuushaa, wadada waa waayo-aragnimo aan caadi ahayn in hadda waxaa loogu yeedhi u gudubno ugu weyn ee Turkiga Van. Inta lagu guda jiro safarka, waxaad la yaaban doontaa quruxda saafiga ah ee dabeecadda, adoo la kulmaya socdaalada xiisaha leh iyo dadka deegaanka ee saaxiibtinimada leh, waxaad awoodi doontaa inaad la kulanto laba dhaqamo kala duwan oo maskaxdaada ku ballaarinaya isla markaana kicinaya shucuuro muuqda.
Waxaa xiiso leh in la ogaado in jidkani ka kooban yahay saddex safar. Marka hore, dadka socotada ahi waxay raacaan tareen ay maamusho kooxda Turkiga, tareenku wuxuu gaadhaa Tatvan, halkaas oo deked ku taal. Doon yar ayaa dadka safarka ah ka raacaysa harada dusheeda ilaa dhinaca kale. Van waa magaalo ku taal dhinaca kale ee harada. Halkan, rakaab ayaa qaadaya tareenka Iran u socda Tehraan. tareen Night istaago xadka u dhaxeeya Turkiga iyo Iran oo rakaab ah dhex mari baasaboorada.
In TransAsia Express, Turkey arki doonaa midabka guduudan oo ka webiga Kizilirmak dheer, Turkey, mid ka mid ah ugu weyn Keban gudbay biriijka Yufraad xidheenka kor ku dhaqaaqi doono Tatvan aad Ferry varacaksınız.b ka Tatvan in Van., On ciidda Iran Markaad timaadid waxaad daawan doontaa qoraxda oo kor usii kacaysa harada loo yaqaan 'Ur Urmia'.
Waxaad ku raaxeysan kartaa koob shaah ah oo turki ah oo ku dhex yaal gaariga cuntada, waad la sheekaysan kartaa dalxiisayaasha kale ama dadka deegaanka ee gaari ku safraya, si deggan u aqri ama waxaad ku raaxeysan kartaa muuqaalka cajiibka ah ee dariishadda. Sidaa darteed, waligaa caajisid markaad la safri doontid Transasia Express. Transasia Express waxay ku siinaysaa khibrad aad u wanaagsan. Marabtaa inaad waxbadan ka ogaato safarkan tareenka ee cajiibka ah oo diyaar u ah xidhmaynta? Baro inbadan oo ku saabsan sida loogu biiro Transasia Express (transasiatra ah). Waxaa la joogaa waqtigii loogu diyaar garoobilahaa farxad weyn sanadka cusub!
Mashruuca tareenka Turkey-Iran-Pakistan ee Afgaanistaan ​​ayaa waxaa sidoo kale ka mid ahaa
Iran, Turkey Tareennada shirwaynaha Badda Madow bari